Maxaan sameeyaa si aan u dhisno bogaga dhirta iyo iyaga SEO?
Qodobkani, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo abuuro bogagga soo dejinta SEO. Halkaan waxaa ah istaraatijiyado waxtar leh oo tixgelin kara markaad dhiseyso bogga soo socda:
waxa ugu horreeya ee aad sameyso waa xulo ereyada aad rabto makiinadaha raadinta si aad ugu sareyso boggaaga. Cilmi-baarista kelmadu waxay noqon kartaa hawl aad u dheer oo adag. Si kastaba ha noqotee, waqtiga aad udub dhexaad u tahay cilmi-baaristan, natiijooyinka wanaagsan ee aad filan kartid - 1.5 ohm clapton.
Ka bilow inaad samayso liiska ereyada ku haboon ganacsigaaga. Ka dibna, garee waxa isku darka ah ee kuwan ka hadlaya rajooyinkaaga kuugu qori karo sanduuqa raadinta Google iyadoo ujeedadu tahay helitaanka boggaaga internetka. Xirfadleyda takhasuska leh waxay soo jeedinayaan in la siiyo ikhtiyaarka ereyada muhiimka ah ee loo yaqaan 'keywords keywords' tan iyo markii ay ka sahlanaato inay ku daraan ereyada ereyada gaaban. Maxay tahay, ereyada dheer ee qaylinaya waxay soo saaraan ROI sare.
Marka aad go'aamineysid ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah, adoo xoogga saaraya dadaalkaaga si aad iskugu siiso istaraatijiyad ahaan bogaggaaga soo degaya
. Haddii aad rabto inaad hesho darajada sare ee SERP, ku dheji erayada muhiimka ah ee ku qoran astaanta cinwaanka, tagska madaxyada, sharaxaadda meta, magacyada feylka muuqaalka iyo nuqulka dhamaantiis.
Tixgeli dib udhaca
Waxaa lagugula talinayaa in aad isticmaasho dhisme isku xir marka aad abuurayso bogagga soo dejinta SEO. Sannadka 2017, helitaanka dadku waxay ku xiran yihiin bogagga shabakadaada wali waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee kor loogu qaadi karo jaantusyada raadinta raadinta. Waxay u shaqeysaa sidan soo socota: haddii qof uu xiiseynayo mawduucaaga ku filan inuu isku xiro boggooda internetka, waxay kuu furfurayaan adiga.
Maalmahan, waxaa jira siyaabo badan oo aad u samayn karto shabakado kale oo ku xiran ilahaaga. Khubarada SEO-ku waxay soo jeedinayaan in aad adeecdo talooyinka soo socda:
Abuuri maaddo gaar ah oo xiiso leh: Sida tirakoobka, muujinta asalka iyo astaamaha aad ufiican tahay, waxaa fiican in la helo.
Aqoonsiga saameynta ku leh suuqa shaqada: Isticmaal gudbinta saaxiibbada, ololaha emailka, iyo warbaahinta bulshada si aad u hesho macluumaadka xiriirka ee shakhsiyaadka ka fiirsanaya.
Waa inaad fahamtaa in dhammaan isku xirnaanta la abuuray siman. Ku bilaw yar yar adigoo isku dayaya in aad ka hesho xiriirrada bloggers. Fiiri baaldarradooda dad badan si ay ula xiriiraan, oo ka shaqee sida aad uga faa'iideysan karto saameynaha muhiimka ah. Xawaaraha boggaga
Xawaaraha bogga ayaa ah mid ka mid ah qodobo dhowr ah oo SEO ah oo ku saabsan Google baxay oo la xaqiijiyay. Sida laga soo xigtay cilmi-baaris ay sameeyeen Kissmetrics, ku dhawaad ​​kala badh dadku waxay filayaan in bogagga bogagga ay ka yaryihiin in ka yar laba ilbiriqsi, 40% waxay ka baxayaan website-ka haddii ay qaadato seddex ama in ka badan ilbiriqsi. Sidaad u fahmi lahayd, tani waxay ku soo noqotaa si kor loogu qaado waayo-aragnimada dadka.
Waxaad si dhakhso ah u eegi kartaa xawaarahaaga boggaaga adigoo ku dhejinaya bogagaaga Boggaga Aaladda Bogga. Adeeggani wuxuu kuu sheegi doonaa haddii boggagaagu kugu filan yahay. Si aad u dardar geliso boggagaaga tixraac tallaabooyinka soo socda:
Isticmaal faylasha sawirada yaryar oo aan tayada wax ka qabin;
U diyaari martigaliyaha degdega ah;
Jooji dhamaanba kordhinta iyo ekaaqyada boggaaga uusan isticmaalaynin.
Waxaan rajeynayaa inaad heshid qodobkan faa'iido leh. Haddii aad haysato fikrado kale oo ku saabsan dhismaha bogagga soo dejinta SEO, nala soo socodsii. Waan jeclahay dhageysigaaga!